Robin Hood (2018) | MM Movie Store
Robinhood အကွောငျး သငျဘယျလောကျသိလဲ????????လူခမျြးသာတှဆေီက အသပွာခိုးယူပွီးဆငျးရဲတဲ့သူတှကေိုဝငှေပေးတတျတဲ့ သူခိုးတဈယောကျ……..လို့အကွမျးဖဉျြးသိထားကွမှာပါ………..Robinhood လို့ပွောရငျ မွှားပဈကြှမျးကငျြသူတဈယောကျ ဆိုတာလဲမကျြလုံးထဲပွေးမွငျမိမှာပေါ့
ဒါပမေယျ့ အထကျက ဆိုခဲ့တဲ့ အခကျြတှကွေောငျ့တော့ သူဟာ ရျောဘငျဟုဒျဆိုပွီးနာမညျတှငျခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး …………………သငျ ငယျငယျက သိခဲ့တဲ့တောပုနျးကွီး ရျောဘငျဟုဒျရဲ့ အကွောငျးတှကေို မပေ့ဈလိုကျပါတော့သငျ သူ့အကွောငျးကို သိပွီးသားလို့ထငျနတေယျဆိုရငျတော့ မှားသှားပါလိမျ့မယျ…….
သငျသိထားပွီးတဲ့ သူ့ရဲ့ဇာတျလမျးဟာ အိပျယာဝငျပုံပွငျတဈပုဒျ ပါပဲဒီဇာတျကားလေးကတော့ အိပျယာဝငျပုံပွငျတဈပုဒျတော့ မဟုတျပါဘူးအသပွာတှခေိုးယူခဲ့ရုံသကျသကျနဲ့တော့ သူဟာ ရျောဘငျဟုဒျဆိုပွီးနာမညျတှငျ ကနျြရဈမှာ မဟုတျပါဘူးသူ့ကို ရာဇဝငျမှာ ကဗညျြးတှငျစခေဲ့တဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျကိုယျကြိုးစှနျ့ လုပျရပျတှကေို ဒီဇာတျကားမှာတှရေ့မှာပါ…..
ဒီဇာတျကားမှာ ရျောဘငျဟုဒျရဲ့ တခွားထူးခွားတဲ့အကွောငျးအရာတှလေညျး ပါဝငျနပေါတယျ …….ရျောဘငျဟုဒျဆိုတဲ့ တောပုနျးတဈယောကျမဖွဈခငျကသူ့ဘဝဇာတျကွောငျး အခွအေနကေိုလညျး ပွောပွထားပါသေးတယျ……လော့ဈလကေို ဟုဒျအဖွဈ ပွောငျးလဲ ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ဆရာနဲ့အတူသူ လကေ့ငျြ့ခဲ့ရတဲ့ ခကျခဲထူးခွားတဲ့ မွှားပဈသငျခနျးစာတှေ……..
သူကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနတှေေ…….သူကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ဘာသာရေးဆိုငျရာ စဈပှဲတှေ……..စသဖွငျ့ သူ့ရငျဆိုငျခဲ့တဲ့ အခကျအခဲတှေ အကုနျလုံးကို မွငျတှရေ့မှာပါဒီတော့ ဒီကားလေးဟာ ဟုဒျရဲ့အတ်ထုပ်ပတိမဟုတျဘဲရျောဘငျလော့ဈလကေ ဟုဒျအဖွဈ သမိုငျးသဈအစပြိုးခဲ့တဲ့အခြိနျလေးကို ရိုကျပွထားတာလို့ပွောရငျပိုမှနျပါလိမျ့မယျ
Robinhood အကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိလဲ????????လူချမ်းသာတွေဆီက အသပြာခိုးယူပြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုဝေငှပေးတတ်တဲ့ သူခိုးတစ်ယောက်……..လို့အကြမ်းဖျဉ်းသိထားကြမှာပါ………..Robinhood လို့ပြောရင် မြှားပစ်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက် ဆိုတာလဲမျက်လုံးထဲပြေးမြင်မိမှာပေါ့
ဒါပေမယ့် အထက်က ဆိုခဲ့တဲ့ အချက်တွေကြောင့်တော့ သူဟာ ရော်ဘင်ဟုဒ်ဆိုပြီးနာမည်တွင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး …………………သင် ငယ်ငယ်က သိခဲ့တဲ့တောပုန်းကြီး ရော်ဘင်ဟုဒ်ရဲ့ အကြောင်းတွေကို မေ့ပစ်လိုက်ပါတော့သင် သူ့အကြောင်းကို သိပြီးသားလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ မှားသွားပါလိမ့်မယ်…….
သင်သိထားပြီးတဲ့ သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ပါပဲဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးအသပြာတွေခိုးယူခဲ့ရုံသက်သက်နဲ့တော့ သူဟာ ရော်ဘင်ဟုဒ်ဆိုပြီးနာမည်တွင် ကျန်ရစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကို ရာဇဝင်မှာ ကဗျည်းတွင်စေခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက်ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်ရပ်တွေကို ဒီဇာတ်ကားမှာတွေ့ရမှာပါ…..
ဒီဇာတ်ကားမှာ ရော်ဘင်ဟုဒ်ရဲ့ တခြားထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ် …….ရော်ဘင်ဟုဒ်ဆိုတဲ့ တောပုန်းတစ်ယောက်မဖြစ်ခင်ကသူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်း အခြေအနေကိုလည်း ပြောပြထားပါသေးတယ်……လော့စ်လေကို ဟုဒ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ဆရာနဲ့အတူသူ လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ ခက်ခဲထူးခြားတဲ့ မြှားပစ်သင်ခန်းစာတွေ……..
သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ…….သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စစ်ပွဲတွေ……..စသဖြင့် သူ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အခက်အခဲတွေ အကုန်လုံးကို မြင်တွေ့ရမှာပါဒီတော့ ဒီကားလေးဟာ ဟုဒ်ရဲ့အတ္ထုပ္ပတိမဟုတ်ဘဲရော်ဘင်လော့စ်လေက ဟုဒ်အဖြစ် သမိုင်းသစ်အစပျိုးခဲ့တဲ့အချိန်လေးကို ရိုက်ပြထားတာလို့ပြောရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်